Amathiphu ama-5 Wokuthuthukisa Okuhlangenwe Nakho Kwe-imeyili Yamaholide ngo-2017 | Martech Zone
Ozakwethu e 250ok, ipulatifomu yokusebenza kwe-imeyili, kanye ne- I-Hubspot futhi Ama-MailCharts banikeze ngemininingwane ebalulekile nokwahluka ngeminyaka emibili edlule yedatha yeBlack Friday neCyber ​​Monday.
Ukukunikeza izeluleko ezinhle kakhulu ezitholakalayo, uJoe Montgomery wama-250ok uhlanganyele noCourtney Sembler, uProfesa Wokungenayo e-HubSpot Academy, noCarl Sednaoui, uMqondisi Wezokumaketha kanye Nomsunguli Wakwa-MailCharts. Idatha ye-imeyili efakiwe ivela ekuhlaziyweni kweMailCharts kwama-imeyili aphezulu we-1000 Retailers '(IR1000) afaka phakathi "Black Friday" noma "Cyber ​​Monday" kulayini wezihloko.
Baphethe ngokuthi ungathuthukisa ukulethwa kwe-imeyili kwakho konke, uvule ama-imeyili, namanani wokuthenga nge-imeyili ngokuqinisekisa ukuthi amasu amahlanu alandelayo asetshenzisiwe kule sizini samaholide:
Imvamisa ye-imeyili - Beka isipiliyoni samakhasimende kuqala futhi ucabangele ukubuza ukuthi ngabe bafuna ukuthola ivolumu ye-imeyili eyengeziwe ngesikhathi samaholide. Ukwenza kanjalo kunganciphisa uhla olubi kakhulu lwamaholide futhi kuqhube ubuqotho bomkhiqizo oqinile.
Nweba Izinsuku Zakho - Ucwaningo lwakamuva lweRetailMeNot lubike ukuthi u-45% wabathengi bahlela ukuqala ukuthenga amaholidi ngaphambi kukaNovemba. Cabanga ukunweba izindiza zomkhankaso kuzindlela zombili; qala ekuqaleni, ugijime isikhathi eside.
Idizayini Engcono - Ukubukwa okunamandla ngama-CTA acacile kungukhiye kuma-imeyili aguqukayo. Ngokwengeziwe, qiniseka ukuthi ama-imeyili akho asebenza kuwo wonke amapulatifomu namadivayisi amakhasimende akho awasebenzisayo ngaphambi kokushaya ukuthumela.
Ukufakazela ubuqiniso - Ngokombiko we-Online Trust Alliance okhishwe ngoJuni 2017, uhhafu wabathengisi abaphezulu abali-100 baseMelika, kanti ingxenye yesithathu kwabangu-500 abahamba phambili abanakho ukuqinisekiswa kwe-imeyili nokuvikeleka okufanele. Ungavumeli ukuphinga ukuhlaselwa kudiliza amaholidi.
Call to Action - Cela amakhasimende ukuthi angeze lokho angathanda ukukuthenga kusuka enqoleni yakho - lokhu kuzonciphisa ukungqubuzana ngesikhathi se-Black Friday / Cyber ​​Monday frenzy. Khuthaza amakhasimende ngezinto ezisenqoleni yawo ukuphuma ukuze afune isaphulelo sakho seholide noma ukunikezwa.
Nayi i-infographic ephelele, i-Black Friday ne-Cyber ​​Monday Inbox Experience.
Tags: 250okukuqinisekiswaUlwesihlanu olumnyamashayela esenzwenii-cyber mondayimeyiliukuqinisekiswa kwe-imeyiliukukhishwa kwe-imeyiliukwakheka kwe-imeyiliisipiliyoni se-inboxabathengisi be-inthanethiamashadi weposi